Educated – Min Thayt
စာအုပ် ၊ စာရေးဆရာ ၊ စာပေ • စာအုပ်ဆိုတာ စာရေးဆရာရဲ့ တမန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။• စာရေးဆရာဆိုတာ လူထုရဲ့ ပညာရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။• စာပေဆိုတာ တိုင်းပြည်ရဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ စာအုပ်ရဲ့ သဘော။ စာရေးဆရာရဲ့ အလုပ်နဲ့ စာပေရဲ့ တာဝန်အကြောင်းကို ပြောချင်ပါတယ်။ စာအုပ်ရဲ့သဘော စာအုပ်ရဲ့ တာဝန်ဟာ၊ စာရေးဆရာရဲ့ ဝိညာဉ်ကို သယ်ဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးဆရာရဲ့...
“ကျည်ဆန်ထက် မြေဖြူကို ပိုကြောက်နေသလော….” သို့တည်းမဟုတ်…. ကျည်ဆန်ထက် မြေဖြူက စွမ်းလို့… သင်းသတ်ခြင်းလော…. အရှိတရားကို ဆန်းစစ်ကြပါ။ ပညာရေးစနစ်အတွင်းက သားကောင်များ နှင့် ပညာရေးစနစ်အတွင်းက သားကောင်းများ။ ကျနော်တို့ ဘာကို ရွေးချယ်ကြမည်နည်း။ ဖြတ်သန်းမှုများဖြင့် ကျနော့်အခြေခံပညာရေးဖြတ်သန်းမှုက၊ သူငယ်တန်းအပါအဝင် ဆယ့်တစ်နှစ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝက ၅ နှစ်။ ပေါင်း ဆယ့်ခြောက်နှစ်တိတိ ကျောင်းသားဘဝကို ကျင်လည်ခဲ့သည်။ အသက်ခြောက်ဆယ်က၊...
မြန်မာပြည်က နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးကို သွားနေရတယ်။ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးမှာ အရေးတကြီးလိုအပ်ချက် တွေ ရှိတယ်။ အရေးအကြီးဆုံး လိုအပ်တာကတော့ လူ။ ပညာတတ်တဲ့လူ။ ပညာတတ်ရှိမှ နိုင်ငံတည်ဆောက် ရေးကို သွားလို့ရမယ်။ ပညာမတတ်တဲ့လူတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီကိုလည်း သွားလို့ မရဘူး။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်အောင်လည်း မလုပ်နိုင်ဘူး။ ပညာမတတ်တဲ့လူတွေရဲ့လက်ထဲကို ဒီမိုကရေစီစနစ် ထည့်ပေးလိုက်တာ သိပ်ကို အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ ဆိုတာလည်း သယံဇာတကို...